Igodo iji ghọta nsonaazụ ego Apple | Esi m mac
Na mbido izu a Apple mee ka ọha na eze mara nsonaazụ ego nke kwekọrọ na nkeji iri na ise nke afọ ụlọnga 2016 na agbanyeghị na ọ debeghachila ndekọ na "nkeji iri atọ na ijeri $ 75.900 na otu ụzọ n'ụzọ atọ nke ijeri $ 18.400 ijeri" ma e jiri ya tụnyere "ahịa nke ijeri $ 74.600 na uru ruru 18.000 nde dollar (…) enwetara na otu ụzọ n'ụzọ anọ nke afọ gara aga ”, ọnụ ọgụgụ ahụ ahapụla ụtọ na utoojoo uto n'etiti ndị na - eketa oke dịka ọ na - egosi na ụfọdụ akụkụ na - agbanwe agbanwe na oge eruola ka ụlọ ọrụ ahụ chee nsogbu ọhụụ ihu.
1 Kedu ihe nsonaazụ ego Apple na-egosi?
1.1 1 ihe ịma aka iPhone
1.2 Ebumnuche 2: ndị ọrụ na-eme iPhones ha
1.3 Ebumnuche nke abụọ: ngwaahịa ọhụrụ
1.4 4.Wall Street na-emeghachi omume
1.5 5.Apple abụghịzi ụlọ ọrụ nnukwu ego
1.6 Ọnọdụ ego nke anyaụfụ
1.7 7 ọgazị ọhụrụ nke tọgbọrọ akwa ọlaedo ahụ
1.8 Ntughari nke onodu aku na uba uwa
1.9 9. Enwere ike ịta ahụhụ maka ịpụ ụtụ isi
1.10 10 nke mbu ahia ahia kwa afo n’abia kemgbe 2003
Kedu ihe nsonaazụ ego Apple na-egosi?
Ọ bụrụ na ruo ugbu a naanị ngwaahịa nke ụlọ ọrụ nke gosipụtara mbugharị na-aga n'ihu na ire ere na ọnwụ na-adịgide adịgide nke ọnụọgụ ahịa ahịa na nkeji iri na ise bụ iPad, ugbu a iPhone yiri ka ọ togoro elu na nke izizi ahịa ha dara ihe a tụrụ anya ha. Na ntinye, Alphabet, nne na nna ohuru Google, enwetawo Apple dika ulo oru kachasi elu.
Ya mere, Apple ga-amalite itughari akụkụ ụfọdụ:
1 ihe ịma aka iPhone
Oge mmefu ego nke izizi nke nsonaazụ ndị a dabara na oge ire ere ekeresimesi, oge azụmaahịa kachasị ukwuu n'afọ n'afọ, na n'agbanyeghị na rere 74,8 nde iPhone nkeji, Apple enwebeghị ike iru ihe mgbaru ọsọ ahụ, nke abụrụla nnukwu ndakpọ olileanya n'etiti ndị na-etinye ego maka na anyị echefughị ​​na anyị na-ekwu maka nnukwu ọkọlọtọ nke ụlọ ọrụ ahụ. Obi abụọ adịghị ya na ọnụahịa ya, kwa afọ dị elu karịa nke gara aga, bụ ihe na-ekpebi. Dị ka ọ dịkwa bụ na "mmụba anọ" na ọgbọ S ezughi ezu iji kwenye na karịa ihe niile, iji kwado mmefu ego ọhụrụ nke ndị ahịa. Ọnọdụ a na-eduga anyị ozugbo na ihe ịma aka ọhụrụ.
Ebumnuche 2: ndị ọrụ na-eme iPhones ha
Ọma. Ọtụtụ ndị ọkachamara kwenyere na nke ahụ iPhone akakabarede na mba ndị mepere emepe ka elu na nke ahụ Ebumnuche Apple ugbu a kwesịrị ịbụ maka ndị ọrụ nwere iPhone okenye iji megharịa ya. Tim Cook n'onwe ya, onye isi oche nke Apple kwuru, sị: "60% nke ndị nwe iPhone nwere iPhone 5S, iPhone 5C, ma ọ bụ ala." Nke a bụ ebe igodo maka ire iPhone ka a ga-echekwa ma mụbaa ọzọ, mana ọ ga - enwe ike ịme ya oke ọnụ ahịa? Ga nụrụ kepu kepu iPhone 5se na nke na-esote iPhone 7 na nke a?
Ebumnuche nke abụọ: ngwaahịa ọhụrụ
Na iPhone "ndakpọ olileanya" ke akpa ini, na iPad nwayọọ nwayọọ na-adịkwa etiti òkè, na na ngwaahịa dị ka Apple TV ma ọ bụ Apple Watch na, ọ bụ ezie na a nabatara ya nke ọma, enweghị nnukwu nnabata nke ngwaahịa ndị ọzọ nwetara, ụlọ ọrụ ahụ nwere nsogbu mepụta ngwaahịa ohuru na ohuru, ya bu, mepụta mkpa ọhụrụ na ndị na-azụ ahịa, ma ọ bụ mee ka anyị hụ ndị anyị chere na anyị anaghị ahụ, iji weghachite ahịa.
4.Wall Street na-emeghachi omume
Ahịa Apple adaala ọtụtụ ọnwa na mmeghachi omume na nsonaazụ ndị a, ọ bụ ezie na ọ bụ ihe nkịtị, bụ ozugbo: Apple mbak adaala ọzọ ihe ruru 6% site na nkwukọrịta nsonaazụ. Na nke a na-echegbu ndị ọchụnta ego ọtụtụ.
5.Apple abụghịzi ụlọ ọrụ nnukwu ego
Edeela Apple dịka ngwaahịa "uru" karịa ngwaahịa "uto", nke a bụ n'ihi nnukwu onye na-ama ya aka, Mkpụrụ akwụkwọ, ugbu a karịrị ya dị ka ụlọ ọrụ nwere nnukwu ego. Ngwaahịa ndị a ‘amagogoro’ kemgbe ha malitere ya n’echiche na ire ahịa ha na-amalite ịta ahụhụ. Ọ gaghị ekwe omume ịnọgide na-enwe ọganihu dị egwu dị ka nke ahụ gosipụtara na Apple n'afọ ndị na-adịbeghị anya, nri?
Ọnọdụ ego nke anyaụfụ
"Anyị mepụtara $ 27.500 ijeri na ego site na arụmọrụ n'oge nkeji iri na ise, wee weghachite $ 9.000 ijeri ndị na-eketa oke site òkè buybacks na dividends," kwuru Luca Maestri, Apple isi ego. N'ezie, n'agbanyeghị mmetụta a dị ịtụnanya mgbe ị matachara nsonaazụ ego nke Apple, ụlọ ọrụ ahụ nwere 216.000 nde dollar "na ego" na ọnọdụ ọnọdụ nwere mma nke na-enye ya ohere ịga n'ihu na atụmatụ ya.
7 ọgazị ọhụrụ nke tọgbọrọ akwa ọlaedo ahụ
Ọnọdụ akụ na ụba China na-ata ahụhụ, n'oge ahụ, ọ na-egbu oge, agbanyeghị, ego nke Apple mepụtara na mba ahụ amụbawo site na 14% n'otu afọ, rute nde dollar 18.373. China bu ohuru ohuru nke na etinye akwa ola edo nye Apple, o na ere ebe ahu karia n’ime ala ya, Tim Cook gara n’ihu n’igosi obi ike ya na ngwangwa ga adi otu: “karia obere oge. nwere obi ike na ogologo oge nwere ike nke ahịa China, ma anyị na-ahụ nnukwu ohere. Anyị na-edebe ego anyị.
Ntughari nke onodu aku na uba uwa
Ma Apple amaghị banyere ọnọdụ akụ na ụba ụwa na karịa, maka mgbanwe nke dollar na, dị ka ụlọ ọrụ ahụ si kwuo, merụrụ ha ahụ nke na ego ha nwere ike ịbụ na 15% dị elu. O doro anya, dollar dị oke ọnụ bụ dollar na-erughị asọmpi.
9. Enwere ike ịta ahụhụ maka ịpụ ụtụ isi
Kọmịshọn European ga n'ihu ịlụ ọgụ megide izere ịtụ ụtụ isi site n'aka ọtụtụ mba dị iche iche na-eji "aghụghọ" dị ka ijupụta Ireland na ndị enyemaka iji depụta akwụkwọ site n'aka ha, ebe ọ na-enye ha nnukwu uru ụtụ isi ebe ahụ. N'oge na-adịbeghị anya, na dị ka Blomberg si kwuo, a mara na Apple nwere ike ihu ugwo nke 8.000 nde euro, n'echiche nke ihe niile ọ na-agaghị akwụ ụgwọ ọtụtụ afọ gara aga. Ndị na-achụ ego anaghị enwe mmasị na nke a, ọ bụ ezie na anyị chere na ọ bụrụhaala na enweghị nsogbu, ha anaghị eme mkpesa. Ọ na-enyekwa ụlọ ọrụ ihe oyiyi na-adịghị mma ọcha.
Maka nke a, Google ekwenyelarị ịkwụ ụtụ isi kwekọrọ na afọ iri gara aga na United Kingdom, nke na-arụ ọrụ megide Apple.
10 nke mbu ahia ahia kwa afo n’abia kemgbe 2003
Apple buru amụma na ngụkọta ego ga-enweta maka nkeji ego nke abụọ n’agbata ijeri $ 50.000 na $ 53.000, ọnụọgụ dị ala karịa amụma ahịa ($ 55.000 ijeri) na $ 58.000 maka otu oge ahụ n'afọ gara aga.
Ndi Apple emen? Ikekwe ee. Agbanyeghi na enwere otutu ihe di na mpụga nke nchịkwa ya nke emetụtala (mgbanwe nke dollar, nsogbu ụwa, wdg), eziokwu bụ na enwere ọtụtụ ihe dabere na ụlọ ọrụ ahụ.
Ikekwe, ịkwụsị ịnọgide na-ebuli ọnụahịa (n'ihe banyere iPhone, ụfọdụ Macs, wdg) na ịhapụ mmeghari ohuru nke ngwa ngwa na-enweghị isi nwere ike ịbụ igodo ndị na-enye Apple ohere ịnọgide na-eto eto karịa mmeghari ohuru nke ndị ọrụ ya na-eme ngwaahịa ha.
Isi mmalite | Bolsamania
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » Noticias » Igodo iji ghọta nsonaazụ ego Apple
Locader, Gbanwee akwụkwọ ahụaja dabere na ọnọdụ nke Mac gị